トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny maha samy hafa ny ankapobeny birao sy vavy, varavarankely ny fotoana nindram-bola
Vao tsy ela, efa nitombo mpanjifa ara-bola ny caching hevitra ny fifandraisana ho an'ny vehivavy irery ihany no antsoina hoe tsara laza.
Izany dia varavarankely izay misy amin'ny ankapobeny, moa ve ianao Inona no fahasamihafana izay nolazainy.
ny vehivavy izay te-hangataka hoavy caching Mas?na ianao, manondro.
dia endri-javatra amin'ny ankapobeny hevitra ny fifandraisana sy ny vehivavy-varavarankely ihany?
ela izay mpanjifa fitantanam-bola, toy ny nataony hoe Sarah ny volamena, no mba hisambotra vola tany am-boalohany dia mafy sary, toy ny olona.
, na izany aza, fa Hianao no fohy ny vola na dia ny raharaha ny vehivavy dia tsy mahazatra.
Noho izany, io no hany fotoana ny fifandraisana izay efa niseho efa noheverina mba afaka mahatsapa afaka ampiasaina amin'ny vehivavy. Misy fahasamihafana kely isaky ny
nahay ny kanto, indrindra ny hevitra tsy mitovy, toy ireto manaraka ireto.
Staff dia vehivavy
tsy ho voalohany mba hampidirana ny mpandraharaha mba hanatanteraka ny fanekena sy ny fifampidinihana dia ny hoe ny vehivavy rehetra.
Izany no hevitry ny fanoherana ny mpanjifa ara-bola ny vehivavy mpampiasa, dia hoy izy tamin'i efa nentina mba hanafoanana na dia kely.
hoy mpanohitra mitovy taovam-pananahana Kotomori, dia afaka manatona amim-pahatsorana ny mahazo aina fihetseham-po, dia afaka fiverenan'ny haka aina na dia amin'ny seranan-tsambo ny telefaonina, toy ny soa ianao no milaza fa maro ny fanahy fiaramanidina.
koa, isaky ny mpanjifa fitantanam-bola, dia miavaka amin'ny vehivavy ny sary sy fanoharana izay nampakatra ny raharaha avy eny aloha.
Ladies bola, mpikarakara tokantrano-namana, ny andian-teny dia toy ny marika, dia manana fampiharana bebe kokoa izay mora ny toy izany tontolo iainana ampy fitaovana tsara.
olona dia tsy mampiasa hatreto dia afaka ihany koa ny telefaonina tsy mahatsapa ny fanoherana.
vehivavy In-varavarankely ihany, nataon'ny vehivavy mpandraharaha ihany koa, toy ny fisoratana anarana ny fandraisana ho mpikambana ho an'ny toeram-piasana, na ao an-trano. Raha niresaka ny
mpanjifa bola, telefaonina ampiharina amin'ny toeram-piasana tsy nety vitsy olona izay vozony.
Na izany aza, raha toa ny antso an-tariby avy amin'ny vehivavy, ho ambany koa mety ho heverina ho avy amin'ny mpanjifa bola.
tsy misy fanampiny fanahiana, dia ho hita mpanjifa bola.
zanabola izay tsy ampy ny ho an'ny vehivavy
Zanabola, izay nametraka ho ambany ao amin'ny drafitra ho an'ny vehivavy
dia iray amin'ireo endri-javatra.
izany, tsy hitombo be dia be ny fidiram-bola na dia ny vehivavy sy ny miasa, eo amin'ny toerana voalohany ny minitra ny vehivavy dia tsy be vola nindramina, ireo izay fandinihana ny ny zava-misy fa mety hahatsapa zanabola lafo vidy.
Mazava ho azy, raha tsy misy akory ny vola miditra ao aminy, satria izay te hisambotra vola miantehitra amin'ny vola miditra ny vady, famerenana Mety ho henjana mihitsy aza.
Raha ny marina, ny fampiharana ny trosa ny mpikarakara tokantrano, ary ny olona izay nitondra ny fangatahana, miampy ny fidiram-bola ny vadiny, no nanorina ny lal?na sy ny habetsaky ny vola azo avy nampisaraka ny iray ampahatelon'ny ny nindrana vola.
raha, aoka ny avy amin'ny kajy mialoha raha misy be dia be ny vola ilaina mba hanatanteraka ny fampiharana.
jereo / rehefa href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> ny vola nindramina avy amin'ny banky misy zanabola ankapobeny
koa ny fomba hampiharana ny fahasamihafana amin'ny andro nindrana amin'ny mpanjifa bola vola < / I2> ny raharaha vehivavy
-bola fotsiny ihany, tsy misy ny fampiasana milina unmanned fifanarahana, dia matetika no tanteraka avokoa tontolo iainana ao amin'ny fampiharana ny Internet no voatendry.
Izany hoe, tena sy vehivavy mpikarakara tokantrano tsy misy ankizy madinika avy tao an-trano matetika, fiheverana manoloana izany amin'ny mora mahatsapa ny fanoherana vehivavy handeha mivantana any amin'ny birao.
mpampiasa, tsy manahy momba ny maso-bahoaka, satria mahatonga misalasala hanao sonia izy, dia lasa malaza antony.
Summary < / I2> caching in
vehivavy-varavarankely fotsiny, satria ny vehivavy mpiasa ny nanolo-tena mifanaraka, azo antoka Na dia sonia voalohany fanadinana. Toy ny fihetseham-po sy ny fanahiana
fanontaniana ihany koa dia ho afaka manatona avy hatrany.
Ankoatra izany, satria ny fanadihadiana dia teo amin'ny tany ny asa ataon'ny-dravehivavy, dia tsy misy manahy momba Bale any am-piasana ny namany.
koa amin'ny fanompoana ambonin'ny, toy ny zanabola ambany Mazava ho azy fa ny nanolo-tena vonona, dia misy ny fomba fampiasana ny vehivavy.
Na izany aza, ny fandinihana, satria atao Toy izany koa na inona na inona ny lahy sy ny vavy, Miezaha hampihatra rehefa mandinika ny lafiny fidiram-bola sy ny fahaiza-hamaly.
Ankoatra izany, fampiharana ny mpanjifa Fitantanam-bola manan-mitombo isa ny tranga izay mety ho na dia avy amin'ny Internet. Raha
in izany, eo an-tampony tsy ho mampiahiahy koa toa ny olona eo amin'ny manodidina, dia mety afaka manohy tsy handeha hahatsapa maz?na birao sy ny fifanarahana unmanned milina fanoherana.
raha, raha raiki-tahotra ny fandaniana tampoka, koa manana ny safidy ny bola-fananganana amin'ny fomba ireo. Caching in
raha, raha raiki-tahotra ny fandaniana tampoka, koa manana ny safidy ny bola-fananganana amin'ny fomba ireo.